15 imisebenzi yezandla yoqobo kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kwemi-12 ubudala | Imisebenzi yezandla
Imisebenzi yezandla yabantwana ukusuka kwiminyaka emi-15 ukuya kwemi-6
Elizabeth Catalan | | Imisebenzi yezandla, Imisebenzi yezandla zabantwana
Njengokuba abantwana bekhula, amandla abo ayakhula, ke lixesha lokuba ubabonise ubugcisa obutsha obunzima ngakumbi ukuze baphuhlise ubuchule babo bokuyila kwaye banelise umdla wabo wokufuna ukwazi. Ukongeza, kule minyaka banako ukwenza uninzi lwazo ngokwabo ngaphandle kolawulo lomntu omdala, ke amava okudala ubugcisa ngokwawo aba mnandi kwaye abe mnandi kubo.
Nazi izimvo ezininzi ze yezandla abantwana iminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ukuze badlale esikolweni nabahlobo babo okanye benze itheko lokuzalwa. Baza kudubula!
1 Islingling yokwenza nabantwana
2 I-headband eneempompo zeendlebe zokwenza nabantwana
3 Iiglasi ze-EVA zecarnival zokwenza nabantwana
4 Incwadana yokubhalela ehonjiswe ngerabha ye-EVA
5 Ikhadibhodi kunye nebhabhathane lephepha le-crepe
6 Imigibe enemibala eyenziwe ngamapayina
7 Ipeni yomququzeleli wabantwana
8 Iislippers ezihonjisiweyo zehlobo
9 Iphazili yezemfundo eneentonga zobugcisa
10 Ubunzima bepensile yecala
11 Izilwanyana ezihlekisayo ezineentonga zomthi
12 Abondli beentaka ngeetoti ezihlaziyiweyo
13 Uyenza njani intlanzi ngeeCD ezisetyenzisiweyo kunye nephepha le-crepe
14 Iinyoka ezenziwe ngepom
15 Isongo kunye nesangqa ngeebhendi zerabha
Ukuba ujonga ubugcisa obulula ukwenza ngokukhawuleza ngexesha lokudikwa, oku isilingi esineephepha kunye neebhaluni ezinemibala lukhetho olulungileyo. Awuyi kufuna izinto ezininzi kwaye nabantwana abaneminyaka emi-6 nangaphezulu banokwenza uninzi lwenkqubo ngokwabo njengoko benokuzimela ngakumbi kunabantwana.
Ukubona onke amanyathelo obu bugcisa kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ubudala, ndincoma ukuba ufunde iposti Islingling yokwenza nabantwana. Abazukufumana nje kuphela umdlalo omnandi wokwakha isilingi kodwa baya kudlala nasemva koko!
I-headband eneempompo zeendlebe zokwenza nabantwana
Lo msebenzi wobugcisa wabantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ubudala ugqibelele ukunika iindwendwe kumsitho wokuzalwa okanye ukunxiba njengenxalenye yesinxibo sezilwanyana. Izixhobo zokwenza lo msebenzi wobugcisa zifumaneka ekhaya (uboya, ikhadibhodi, isikere, ikama ...) ekuphela kwento oya kuyidinga ukuyithenga iya kuba ngamabhanti acacileyo embala ofana noboya.
Ukwazi ukuba uzenze njani, ungaphoswa yinkqubo eposini I-headband eneempompo zeendlebe zokwenza nabantwana. Apha kuza yonke into ichazwe inyathelo ngenyathelo.
Iiglasi ze-EVA zecarnival zokwenza nabantwana
Xa iCarnival isondela, le yenye yezobugcisa ekufuneka uyithathele ingqalelo kuba ilula kwaye iyakhawuleza ukuyenza. Ilungele abantwana abangaphezulu kweminyaka emi-6 ubudala kodwa kubantwana abancinci kuyacetyiswa ukuba babekwe esweni ngumntu omdala.
Ezi iiglasi ngerabha ye-EVA Banobume bentliziyo kodwa enyanisweni ungayikhetha eyona uyithandayo okanye efanelekileyo ngokufanelekileyo kwisinxibo esifunwa ngumntwana, njengeenkwenkwezi okanye iiglasi ezikwere. Ukuba ufuna ukubona ukuba zenziwa njani ungaphoswa yile post Iiglasi ze-EVA zecarnival zokwenza nabantwana.
Incwadana yokubhalela ehonjiswe ngerabha ye-EVA
Ukubuyela esikolweni kuyasondela kwaye lixesha lokulungiselela zonke izinto zesikolo abantwana abazakuzidinga kunyaka olandelayo. Unokwenza ezinye zezinto ngokuzihombisa ngendlela eyahlukileyo ngobuchule obuncinci, umzekelo ukuphinda ubhale uphawu lweMinnie Mouse kwiincwadana zabo.
Abalinganiswa beDisney bathanda abantwana abaninzi. Awuyi kufuna izinto ezininzi ukwenza olu luyilo kwincwadi yokubhala. Ngaphezu, umntwana unokwenza uninzi lwenkqubo eyedwa. Kungenxa yoko le nto yenye yezona zinto zilula zobugcisa kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ubudala.
Ukubona ukuba yenziwe njani ndincoma ukuba ujonge iposti Incwadana yokubhalela ehonjiswe ngerabha ye-EVA.
Ikhadibhodi kunye nebhabhathane lephepha le-crepe
Enye yezona zinto zipholileyo kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ubudala yile yekhadibhodi kunye nebhabhathane lephepha le-crepe. Ayithathi xesha lide ukuyenza kwaye ungasebenzisa ezinye izinto osele unazo ekhaya ezinjengeglu yephepha, amakishayo amnyama, ikhadibhodi nephepha le-crepe. Kulungile ukwenza nangaliphi na ixesha nabantwana ngakumbi xa kubanda okanye kunetha kwaye kukho amathuba ambalwa okuphuma phandle uyokudlala.
Ukwazi ukuba ungayenza njani inyathelo ngenyathelo, ungaphoswa sithuba Ikhadibhodi kunye nebhabhathane lephepha le-crepe apho icaciswe kakuhle ukuba ungayenza njani le bhabhathane entle.
Enye yezinto zobugcisa ezihlekisayo kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ubudala ukuhombisa amagumbi abantwana kukwenza oku iinkumba ezinamaphayinti nibe nako ukuqokelela ebaleni. Yindlela yoqobo yokunika ezi phayinaphu ukusetyenziswa ngokutsha.
Ukwenza le minenke inemibala uyakufuna kuphela ikhadibhodi encinci, ipeyinti ye-acrylic, umakishi omnyama kunye nesilicone eshushu esincinci abaya kufuna uncedo ngayo ngeli nyathelo. Kwiposi Imigibe enemibala eyenziwe ngamapayina Unokufumana ividiyo ngenkqubo yonke yokwenza obu bugcisa.
Ipeni yomququzeleli wabantwana
Abantwana bayakuthanda ukuzoba kwaye bahlala bathanda ukuqokelela isixa esikhulu sekhrayoni, iipensile kunye neempawu zokugqibela ekugqibeleni ezihlala zijikeleza indlu. Ukuthintela oku kwaye ube nayo yonke imizobo kwindawo enye ngaphandle kokulahleka, akukho nto ilunge ngakumbi kunokwenza oku Iipensile zokucwangcisa zabantwana.
Phakathi kobugcisa kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kwe-12, le yeyona nto ilula kwaye iyonwabisa kakhulu ukuyenza. Ukongeza, iya kukuvumela ukuba uphinde uphinde uphinde usebenzise izinto esele unazo ekhaya, ezinje nge-ice cream stick ozityileyo ehlotyeni. Endaweni yokubalahla, gcina kwaye ungafundisa ukuba ungayenza njani le nto Ipensile yabantwana yomququzeleli wepensile.
Iislippers ezihonjisiweyo zehlobo
Yiyo ubugcisa obugqwesileyo benzelwe abantwana abadala kwaye banokunxiba amateki amahle amnandi kweli hlobo. Ungabanceda abancinci ukuba benze imizobo kwaye baya kuthanda nokuyiphatha. Olu luyilo lulula kakhulu kwaye uyakufuna kuphela iziphawuli ezibomvu kunye eziluhlaza kunye nezinye iiteki ezimhlophe.
Kwiposi Iislippers ezihonjisiweyo zehlobo Unokuyifumana ividiyo yokwenza obu bugcisa kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 inyathelo ngenyathelo.
Iphazili yezemfundo eneentonga zobugcisa
Ukuthatha ithuba kwezinye izinto onazo ekhaya njengezinye iinkuni ezenziwe ngamaplanga eziza ne-ice cream ungayilungiselela le nto ubugcisa obulula kakhulu apho abantwana baya kuba nexesha elimnandi.
Awunakufuna izinto zokwakha, iintonga nje ezimbalwa, ezinye iikhrayoni kunye nenzondelelo encinci. Kwipuzzle, abantwana banokukhulisa ukucinga kwabo kwaye bazobe yonke into ethi qatha engqondweni: iintyatyambo, izilwanyana, iziqhamo, iiplanethi ...
Ukuba ufuna ukubona ukuba yenziwa njani kwasekuqaleni, ungaphoswa ngumyalezo Iphazili yezemfundo eneentonga zobugcisa.
Ubunzima bepensile yecala
Ngeeklasi ezijikeleze ikona, ukugqibezela ngokugqibeleleyo kwi-EVA Notebook craft endithethe ngayo ngaphambili yile Ubunzima bepensile yecala, enye yezona zinto zipholileyo kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 abanokuzenza ngokulula ngoncedo lwakho.
Kukulungele ukuhambisa ubhaka okanye ukugcina iipensile kwidesika kwaye uzigcine zilungelelanisiwe. Ngapha koko, ityala lixinekile kangangokuba lithatha phantse akukho ndawo kwaye abantwana baya kusithanda isiphumo. Ukuba ufuna ukubona ukuba yenziwa njani inyathelo ngenyathelo, ungaphoswa ngumyalezo Ubunzima bepensile yecala.
Oku kulandelayo yenye yezona zinto zenziwe ngobuchule kunye nokuzonwabisa kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ubudala abanokuzenza ngokurisayikilisha iintonga ze-ayisikhrim kunye nezinye izinto osele unazo ekhaya ezinjengekhadibhodi enemibala, amakishayo, iipensile, isikere, njl.
Lo msebenzi wobugcisa uquka ukwenza ezinye izilwanyana ezintle ezintle ezineentonga zomthi. Kwiposi Izilwanyana ezihlekisayo ezineentonga zomthi Unokufumana ividiyo echaza inkqubo yokwenza imveliso yentlanzi, intshontsho, idayinaso ... kunye nomfanekiso-ngqondweni omncinci, ngubani owaziyo ukuba zeziphi ezinye izidalwa onokuzenza. Yintoni eqinisekileyo kukuba uya kuba nexesha elimnandi!
Ukuba kusapho lwakho uthanda ukuphinda usebenzise kwakhona ukuze ukhathalele indalo kunye nokusingqongileyo, apha unebugcisa obuhle kakhulu oya kuthanda ukuhombisa igadi kwaye bondle iintaka ezincinci. Ngoncedo lwakho, yenye yezobugcisa obuhle ebantwaneni ukusukela kwiminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ubudala onokuyenza kunye.
Izinto ezilula ukuza ngokuza: ziinkonkxa zokutya ezimbalwa, irabha ye-EVA, ipeyinti, umtya othile kunye namaso. Ukubona ukuba kwenziwa njani ungafunda iposti Abondli beentaka ngeetoti ezihlaziyiweyo.
Ukuba unemizuzu engama-20 kunye neeCD ezimbalwa ungazenza ezi iintlanzi ezimibalabala zokuhombisa igumbi yabancinci. Le yeyona nto ikhawulezayo kwaye ilula kakhulu kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ubudala onokuthi ufundise abantwana ukuba bayenze ukuze bonwabe.
Kwiposi Uyenza njani intlanzi ngeeCD ezisetyenzisiweyo kunye nephepha le-crepe Ungazibona zonke izixhobo kunye nenkqubo yenyathelo nenyathelo yokwenza le minnows. Sukuphoswa yiyo!
Iinyoka ezenziwe ngepom
Unazo iipompo ezinemibala kunye namaso ajikeleze indlu? Ukugqibelela! Ungazisebenzisa ukwenza imibala kunye iinyoka ezintle onokuhombisa ngayo nayiphi na ikona yabantwana yendlu.
Ubume bayo bulula kakhulu, ubuhlalu kunye neepompo zidityaniswe ngentambo ukwenza imilo yesi sirhubuluzi. Ukuba ufuna ukuzama ukuyenza, ndincoma ukuba ujonge iposti Iinyoka ezenziwe ngepom apho uyakufumana yonke inkqubo.
Isongo kunye nesangqa ngeebhendi zerabha
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungayenza njani enye Izacholo kunye namakhonkco aneebhendi zerabha ezipholileyo ukunikela? Uya kudinga kuphela iigummies ezinemibala kunye nokuvalwa okubonakalayo okufana nehuku. Uya kuyifumana yonke imiyalelo kwiposti Isongo kunye nesangqa ngeebhendi zerabha. Yenye yezona zinto zintle kakhulu kubantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 yokunxiba kweli hlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla yabantwana ukusuka kwiminyaka emi-15 ukuya kwemi-6
Iileta ezenza uphawu, iposta, njl.
Imisebenzi yezandla ezi-5 yokubuyela esikolweni, icandelo 2